अश्लील चलचित्र हेरिसकेपछि किन अण्डकोष दुख्छ ? « Health Chautari
६ आश्विन २०७७, मंगलवार २१:५६
अश्लील चलचित्र हेरिसकेपछि किन अण्डकोष दुख्छ ?
Published on : ६ आश्विन २०७७, मंगलवार २१:५६
अश्लील चलचित्र के हो ?
सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा यो एक यौन चलदृश्य भएको चलचित्र हो । यस्ता यौनचलचित्रलाई धेरैजसो पश्चिमा मुलुकमा वयस्क चलचित्र (adult film) भनिन्छ भने कतिपय मूलुकमा अंग्रेजी शब्द blue film को प्रयोग भएको पाइन्छ । अहिले कतै-कतै त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नीलो चलचित्र पनि भनिएको पाइन्छ । किन यस्ता यौन चलचित्रका लागि blue film शब्द प्रयोग गरिन थालियो भन्ने कुरामा फरक-फरक धारणा पाइन्छ ।
कतिले blue अश्लिलता वा अशिष्टतासँग जोडिने र केही ठाउँमा यस्ता कतिपय कुरालाई रोक्न कडा कानुन बनाइएको र त्यस्ता कानुनलाई blue law भन्ने गरिएकाले यो शब्द प्रयोगमा आएको मान्छन् । अर्कातिर अठारौं शताब्दीमा पुस्तक पसलेले अश्लील सामग्रीलाई नीलो रङ्गको कागजले बेरेर दिने तथा पछि यौन चलचित्रको टेप आएपछि त्यही नीलो पहिचानका लागि नीलो रङ्ग प्रयोग गरिने भएकाले blue film भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुन सक्ने मानिन्छ । अहिले यस्ता यौन चलचित्र मानिसले आफ्नो यौन सुखलाई बढावा दिन सहयोगी सामग्रीका रूपमा हेर्ने चलन बढ्दो छ ।
यौन उत्तेजना कसरी हुन्छ ?
यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो । यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले निश्चित कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्छ । यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एक त endocrine system (इन्डोक्राइन सिस्टम) अन्तर्गतका रागरसहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्दि्रय प्रणालीका साथमा स्नायुप्रणालीले पनि ।
यौनेच्छा जागेका बेला (विकसित हुने) वा त्यसको व्यग्रतामा रागरस अर्थात् हार्मोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । टेस्टेस्टेरोन नामको हार्मोनले यौनेच्छा वा यौन व्यग्रतालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । महिलामा पनि यो हार्मोनकै कारण यौन व्यग्रता जागृत हुन्छ ।
टेस्टस्टेरोनको कमी भएको अवस्थामा यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता हुँदैन । अन्य शारीरिकक्रिया जस्तै यौनक्रियाका लागि पनि हाम्रा इन्दि्रयहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यौन उत्तेजनाका लागि हाम्रा इन्दि्रयहरू नभैनहुने कुरा हुन् । हाम्रो शरीरलेे कसरी आनन्द पाउँछ भन्ने कुरा नै ऐन्दि्रकता हो । यो हाम्रो शरीरको पाँच इन्दि्रय : दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गन्ध तथा स्वादसँग सम्बन्धित छ ।
शरीरका कतिपय यौन संवेदनशील अङ्ग वा क्षेत्र स्पर्श गर्दा यौन उत्तेजना वा आनन्द प्राप्त हुन्छ र उक्त आनन्द प्राप्त गर्न व्यक्ति जहिले पनि लालायित रहन्छ । गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यौनसम्पर्क एक विशेष स्पर्श नै हो । त्यसैगरी दृष्टिको पनि यौन उत्तेजनामा निकै ठूलो महत्त्व छ । स्पर्शपछि सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो स्थान यसैको छ । सबैजसो व्यक्ति यौनदृश्यबाट उत्तेजित हुन्छन् । गन्धको पनि मानव यौनजीवनमा निकै महत्त्व हुन्छ । सुगन्ध र अत्तरको प्रयोग गर्नुका पछाडि चेतन वा ्रअचेतन स्थितिमा यौन नै रहेको पाइन्छ । स्वादको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र महत्व भने केही कम भएको मानिन्छ, तर मुखमैथुनमा संलग्न हुनेहरूका लागि यो निकै महत्वपूर्ण सावित हुनसक्छ । चुम्बन एक हदसम्म स्वादसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
आवाज वा ध्वनिले पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यौनजीवनमा । सञ्चार गर्न प्रत्यक्ष प्रेमालाप होस् वा अपरोक्ष ध्वनिले भूमिका खेल्छ अनि त्यसमा गीत-संगीत कुरा पनि छन् । इन्दि्रयहरूवाट ग्रहण गरिएका सन्देशहरू मस्तिष्कसम्म पुग्ो पछि चेतन रूपमा हामीले उक्त कुरा थाहा पाउँछौं । विभिन्न अङ्ग (स्रोत) बाट सन्देशहरू स्नायु प्रणालीका नसाहरूबाट विद्युतीय तरंग वा रसायनहरूको माध्यमवाट मस्तिष्कसम्म पुग्छन् र त्यसलाई मस्तिष्कले अर्थ लगाएपछि हामीले थाहा पाउँछौं । यौन उत्तेजना हुने किसिमका सन्देशहरू प्राप्त भए हामीमा यौन उत्तेजना बढ्छ । व्यक्तिअनुसार कुन किसिमको सन्देश बढी यौन उत्तेजक हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ फरक-फरक हुन सक्छ ।
के यौन उत्तेजनापछि अण्डकोष दुख्छ ?
यौन चलचित्र हेर्दा तपाईंको दृष्टि अनि त्यसैसँग जोडिएर आउने यौन परिकल्पनाका साथै यौनाङ्गको स्पर्शजस्ता कुराले यौन उत्तेजना हुन्छ । यौन उत्तेजनापछि स्खलित नहुँदा पनि अण्डकोषमा पीडा भएको महसुस हुन्छ । यौन उत्तेजित हुँदा हाम्रा यौन अङ्ग तथा त्यस वरिपरिको भागमा रक्त प्रवाह बढी हुन्छ । तपाईंलाई थाहै होला, लिङ्गको उत्तेजना पनि लिङ्गको विशेष तन्तुमा रगत भरिएका कारणले नै हुन्छ ।
लामो समयसम्म यौन उत्तेजना हुँदा वा यौन उत्तेजित अवस्थामा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा अण्डकोष तथा प्रोस्टेट ग्रन्थिमा बढी रक्त प्रवाहका कारण तरल पदार्थ (lymphatic fluid) जम्मा हुन पुग्छ । यसले गर्दा केही मात्रामा यी अङ्गहरू सुन्निन सक्छन् फलस्वरूप अण्डकोष वा यौनाङ्ग क्षेत्रमा केही पीडा भएको वा असजिलो वा भारीपन अनुभव हुन्छ । अनौपचारिक बोलीचालीको अंग्रेजी भाषामा यसलाई दगिभ दबििक भनिन्छ । लामो समयसम्म बढी रक्त प्रवाह भएर त्यहीँ रहँदा त्यसमा अक्सिजन -प्राणवायु) को मात्रा कम हुन्छ फलस्वरूप यो केही गाढा रंगको हुन पुग्छ, त्यसैले यसलाई blue balls भनिएको हो ।
यस्तो स्थिति आउन नदिने एक प्रमुख उपाय वीर्य स्खलनको स्थितिमा पुग्नु हो । कहिलेकाहीं यौनसम्पर्कको माध्यमवाट उक्त स्थितिमा पुग्न नसकिए हस्तमैथुनको सहारा लिन सकिन्छ । केही पीडा वा असजिलो भए पनि सामान्यत: यसको कुनै दीर्घकालिन नकारात्मक असर भने हुँदैन । यस्तो पीडा वा असजिलो अस्थायी हुन्छ र एक-दुई घण्टामा स्वत: कम भएर जान्छ । कहिलेकाहीं भने पीडा कम हुन केही बढी समय पनि लाग्न सक्छ, तर पनि यसलाई कम गर्न केही उपाय अपनाउन सकिन्छ । यौन चलचित्र हेर्नेबाहेक यौनसाथीको चाहना वा आपसी सहमतिमा निकै लामो समयसम्म वीर्य स्खलन नै नगरी उत्तेजित अवस्था रहने अवस्था पनि आउँछ र blue balls को स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
यौन क्रियाकलापको बीचबीचमा अण्डकोषको हल्का मालिस गरे पीडा वा असजिलो कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैगरी उत्तानो परेर सुत्ने वा सास रोकेर कन्ने (ताकि छातीभित्रको दबाब बढी होस्) कुराले पनि फाइदा हुन्छ । अण्डकोष वा यौनाङ्ग क्षेत्रलाई केही चिसो पार्न सकिए पनि फाइदा हुनसक्छ । यसो गर्दा रक्तनसा खुम्चने हुँदा अण्डकोषमा रगतको बहाव कम हुने र लसिका रस बाहिरिन जान मद्दत मिल्छ, जसले सुन्निएको कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । हल्का कसरत जस्तैहिँड्ने वा सिँढी चढ्ने कुराले पनि फाइदा हुने बताइएको छ । यो खासै कुनै रोग होइन भन्ने कुरा त बुझिसक्नुभयो होला नै, तर अति नै पीडा भए चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्छ ।